नयाँ पृष्ठ सृजना र गतिशील विकिपीडिया बारेसम्पादन
पृष्ठ डिलिट भएको बारेमासम्पादन
मैले लोकप्रिय पत्रकार गिरिजा अधिकारीको बारेमा ‘गिरिजा अधिकारी’ शिर्षकको पृष्ठ तयार पारेको थिएँ । तर अहिले त्यो पृष्ठ हटाइएको छ । यो पृष्ठ के कारणले हटाईयो होला ? यसलाई पून समावेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कृपया जानकारी दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । - Chandraghalan (कुरा गर्ने) १३:४७, २० डिसेम्बर २०२१ (नेपाली समय)
Chandraghalanजी, तपाईले तयार गर्नु भएको 'गिरिजा अधिकारी' शिर्षकको पृष्ठमा समेटिएको विषय महत्व नभएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित रहेको कारणले यस अघि नै मेटाइएको हुनाले तपाईबाट पुनः तयार गरिएकोले उक्त पृष्ठ मेटाइएको जानकारी दिन चाहन्छु।nShrestha २१:३२, २० डिसेम्बर २०२१ (नेपाली समय)
अन्तिम सम्पादन २० डिसेम्बर २०२१, २१:३३